Hlangana Nethimba Lakho - Isikole Sokukhuluma Ngaphakathi, eCambridge
UJoanne Venter: Okuyinhloko & Umqondisi Wezifundo (BA UED DELTA)
UJoanne ubelokhu efundisa kusukela nge-1984 futhi efundise eNgilandi, eFrance naseNingizimu Afrika. Ngaphambi kokuba eze eSikoleni Sezilimi Ephakathi, uJoanne wayesebenza izifundo zokuqeqesha othisha eLondon, kanye nokuphatha uhlelo lokufunda nokubhala kanye nehlelo lokufundela ekhaya eNyakatho London. Ngaphambi kwalokho, wayengumsizi oMsizi weZifundo eBusiness College yaseLondon. Uthando lwakhe lufundisa amakilasi okuhlola ikakhulukazi ama-IELTS nama-FCE amakilasi kodwa futhi ufundise iPET, ESOL kanye neBusiness English futhi wagijima noMnyango weFrance iminyaka eyi-13. Ngesikhathi sakhe samahhala uthanda ukubuka amafilimu, izinkondlo zokubhala, ukudlala upiyano nokuya ehlathini nomyeni wakhe Mark.
UJames Dennis: Umqondisi Womsizi Wezifundo Nezikhulu Zezivivinyo (BSc DELTA)
UJames wafunda iSayensi Yezokudla eyunivesithi futhi waqeda ukusebenza komakhi we-chocolate uCadbury. Kodwa-ke, njengoba efunde isiRashiya nesiFulentshi, uJames wazi ukuthi wayekhetha izilimi nge tshokoleji (uJakobe ngempela ?!) futhi wafunda ukuba ngumfundisi wesiNgisi. Kusukela ngaleso sikhathi uJames ufunde isiNgisi eRussia naseCzech Republic nasezikoleni zasehlobo e-UK. Ngesikhathi sakhe sokuphumula uthanda ukuhamba ngebhayisikili. UJames uvela eBideford, Devon futhi ungumsekeli onothando kaPlymouth Argyle, iqembu lakhe lebhola lezinyawo. UJames uthi, "Ngithanda ukufundisa e-Central Language School ngoba iyakhathalela ngempela abafundi bayo futhi yiyona nto ebaluleke kakhulu." Futhi ithimba elinobungane ngempela. "
UHeidi Moat: Uthisha (MA CELTA)
U-Heidi wajoyina isikole ehlobo lika-2014. Ngaphambi kwalokho wafunda ukufunda nokubhala nokuthuthukiswa futhi wasiza ekusebenziseni izinhlelo zokufunda nokubhala emazweni ahlukene kanye nokuqeqesha othisha ezindaweni zasemaphandleni. "Ngiyakuthanda ubuciko bokufundisa," kusho uHeidi. "Kukhona izindlela ezintsha zokwenza ukufunda kujabulise futhi kuphumelele futhi kuyajabulisa kakhulu ukubona abafundi bethu bekhula ngokuzethemba." UHeidi ungumculi othanda amateur, uthanda ukudansa futhi uphinde adle ukudla okufundiswa abafundi kwiMinitela Yomhlaba Wonke.
IBethany Tranter: Uthisha (MAHons CELTA)
I-Bethany ekuqaleni ivela e-Oxfordshire (ingxabano eCambridge, kodwa ungakuphikisi lokho ngokumelene naye kakhulu!). Wafunda isiFulentshi neziLimi eLizunivesithi yase-Aberdeen eScotland, lapho aqala khona ukuthanda ukufundisa isiNgisi. Wafundisa eScotland, e-Ecuador naseSpain iminyaka engu-4 futhi ubelokhu eseCambridge kusukela ku-2017. Uthi, "Ngiyathanda kakhulu ukusebenza emfudumeni, emndenini waseCentral Language School Cambridge futhi ngiyingxenye yeqembu elihlose ukusekela abafundi ngazo zonke izindlela. Ngiyazisa futhi ukwazi ukuthatha izinto engizijabulelayo ekuphileni kwami ​​kwansuku zonke bese ubayisa emisebenzini ejabulisayo yohlelo lomphakathi. " Ngesikhathi sakhe samahhala, iBethany uthanda ukwenza iSpanishi, ibhayisikili, ukupheka, ukwenza amakhadi, ukudansa kwaseScotland nokuhamba ngezinkuni.
USian Serrano: Isiphathi Sokuphatha Ne-akhawunti (BA)
USian ubelokhu esikoleni kusukela ku-2003 ngakho-ke uyazi okuningi ngesikole nasemlandweni wayo. Wayesebenza nakwezinye izilimi zezincwadi ze-3 eCambridge ngaphambi kokuba eze lapha. Ngemva kokufunda izilimi ngokwakhe uSian ukhuluma iSpanishi nesiFulentshi futhi ujabulela ukuhlangana nabantu abavela kwamanye amazwe. Kanye noJoanne noGerry, usiza ngemibono eminingi ehlukene yabafundi ngaphambi kokuba beze lapha ukuyofunda. Uthi, "Ngiyathokoza kakhulu ekugcineni ukuhlangana nabafundi ngemuva kokushintshanisa ama-imeyili amaningi nabo." Uma engekho emsebenzini, uSian uhlala ematasa kakhulu enakekela umndeni wakhe.
Gerry Beves: Indawo yokuhlala nokuthengisa (BAHons PGDip CELTA)
UGerry ungumuntu wamathalenta amaningi. Wafundisa ku-CLS ku-2014-2015 futhi uye wafundisa nokufunda kwabafundi baseGypsy nabahambi kanye nokusebenza njengombazi nomfundisi wesonto. Ushadile nezingane ze-2. Unesithakazelo ngemikhuba yobuKristu yesikole futhi uyakuthanda ukudoba nomndeni wakhe, amapaki ekhanda, ukudlala isiginci, ukusiza indodakazi yakhe ukuba ifunde isiginci, i-violin ne-banjo, ifundise indodana yakhe indlela yokubhala nokwakha ama-robot, ithathe umkakhe ukuba idle isidlo sakusihlwa (ikakhulu lapho ekhokha), ebhala izincwadi, futhi evila!
Isikole sithatha abafundisi bokunikeza usizo ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi ngezikhathi zomatasa zonyaka. Nazi ezinye zamalungu wethu wethimba avamile:
Gail Featherstone MAHons (isiFulentshi) & MA TESOL
UGail wafunda futhi wafundisa isiFulentshi nesiJalimane ngaphambi kokuba ashade noSimon, umbhali waseBrithani. Bonke babenezingane ze-3 futhi bahlala eChina, eBelgium, eSwitzerland naseMalaysia. UGail uthi esinye seziqu eziwusizo kakhulu ekuphileni kwakhe kwamanye amazwe kwakukuzimisela ukucula i-karaoke ngesikhathi sesaziso somzuzu! Emva kokufa kukaSimon uGail wasebenza e-London eLondon futhi wagcwalisa iMasters in Teaching English kubaNqophisi bezinye iziLimi. Uthanda umoya ofudumele, umndeni waseCentral kanye nethuba lokuhlangana nabafundi abavela emhlabeni wonke. Ukucula, ukubhukuda nokubhala imidwebo yedrama kukhona ezinye zezintandokazi zakhe ezizithandayo.
I-Lena Payne MS & BA ku-Linguistics MA CELTA.
U-Lena wazalwa futhi wakhulela eKyiv, e-Ukraine. Une-Master's in Linguistics kanye neziqu zeCELTA, futhi waqala umsebenzi wakhe wokufundisa ngo-1999. ULena uthi, "Ngikujabulela kakhulu ukusebenzisana kwabafundi beminyaka ehlukene nezizinda namasiko. Ukuzibona zithuthuka futhi zifunda ukuzethemba isiNgisi kuyangigculisa kakhulu.Abafundi baletha inotho yokuhlangenwe nakho kwempilo okulungele ukuhlanganyela ekilasini ngesikhathi sezifundo, ngakho-ke njengothisha awusoze wayeka ukufunda! Ibhonasi eyengeziwe yokufundisa eCentral Language School ukuthi inomusa omkhulu, umoya opholile futhi owamukelayo ”. Esikhathini sakhe sokuphumula uLena uthanda ukuya endaweni yemidlalo yeshashalazi, ukudansa i-salsa, ukukhuphuka izintaba (hhayi eziphakeme kakhulu!) Futhi aqhubeke nokuhamba nomndeni wakhe kanye nenja yabo uMealk.
© 2017 Central Language School, eCambridge